The kacha mma hotels na Punta Cana The kacha mma hotels na Punta Cana | Akụkọ Njem
Họtelu kacha mma na Punta Kana
Mariela Carril | | ulo, Dominican Republic
Onye nke kasị mma beach aga Central America bụ Punta cana, ebe di na Dominican Republic ebe otutu di bu ihe ndi mara mma na ulo oriri. O nwere osimiri osimiri 32 nke nrọ rutere na mmiri na-ekpo ọkụ na ihe niile onye ọ bụla ga-enwe ezigbo oge na ezumike chọrọ.
Mpaghara Punta Cana, ya na Bávaro gbara agbataobi mejupụtara ihe a na-akpọ Aki oyibo ọ bụkwa n’ebe a ka ha nọ ụlọ nkwari akụ kacha mma na Punta Kana. You chọrọ ịga dị ka di na nwunye, na ndị enyi, dị ka ezinụlọ? N’isiokwu nke taa, ị ga - ama ebe obibi ndị a niile, mgbe ọrịa na - efe efe gafere, ị ga - enwe ihe niile ị ga - ekpori ndụ.
1 Hotels kacha mma maka ndị di na nwunye na Punta Kana
2 Ezigbo ụlọ ụlọ ndị kacha mma na Punta Kana
3 Hotlọ nkwari akụ niile na Punta Kana
Hotels kacha mma maka ndị di na nwunye na Punta Kana
Obi abụọ adịghị ya na Punta Kana bụ otu n'ime ndị kasị họọrọ honiimuunu ebe. Nke a okpomọkụ ebe bụ a magnet maka newlywed di na nwunye. Kedu ihe dị mma karịa mmiri doro anya, ájá ọcha na nnukwu nhọrọ ntụrụndụ?
El Na-eku ume Punta Kana n'elu ndepụta anyị taa. Ọ bụ naanị ụlọ ezumike nka nke ndị okenye, nke nwere ụsọ osimiri jupụtara na ya, aja ọcha. Nhọrọ ụlọ obibi zuru oke, Unlimited Luxury, gụnyere ihe niile: site na nri nri na mmanya, na mmanya, ọdọ mmiri, ọrụ osimiri, WiFi, ihe ngosi, egwuregwu mmiri na ọtụtụ ndị ọzọ.
El Sivory nke Port Blue Boutique Ọ bụ ụlọ nkwari akụ ọzọ maka ndị okenye naanị, site na ise kpakpando Atiya. Emezigharị ya n’oge na-adịbeghị anya ma nwee oke okike gbara ya gburugburu. Ọ na-emi odude dị nnọọ 40 nkeji si Punta Cana International Airport na anya nke ihe Caribbean Sea. Ọ gụnyere spa na oke ime ụlọ nwere mbara ihu nkeonwe.
Ọdọ mmiri dị n'èzí buru ibu, enwere ụlọ ịgba tennis na ụsọ osimiri dị iche iche ebe ị nwere ike ịmị mmiri. Na mgbakwunye, ọ bụ minit 15 site na ụgbọ ala sitere na Catalonia Caribe Golf Club na ihe na-erughị kilomita 7 site na Manati Amusement Park, ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ ma gaa ije.
Ọzọ mara hotel maka di na nwunye bụ Ihe nzuzo Cap Cana Resort & Spa. Ọ bụ naanị 2 kilomita na ọkara site na marina Cap Cana, ya mere aha ya, yabụ ị nọ nso ime ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ na-nwere a cha cha, a mmanya, a restaurant na-anọ n'èzí na-egwu mmiri.
Ihe ọzọ dị nso bụ Dolphin Island, Hoyo Azul na ọtụtụ ọdọ mmiri. Ọ dịghị di na nwunye nwere oge ọjọọ na họtel a pụrụ iche. N'ikpeazụ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ hotels naanị maka di na nwunye, e nwere Nzuzo Royal Beach na Catalonia Royal Bavaro.
Nke mbụ nwere ụdị ọhụụ ọgbara ọhụụ ma biri mita 640 nke osimiri ọcha na nkwụ. O nwere ụlọ 641 maka naanị ndị okenye na ndị anaghị a smoụ anwụrụ ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka ngwugwu okomoko ị bi na paradaịs 24 awa kwa ụbọchị. The Catalonia bụ otu, o nwere a onwe osimiri, ọtụtụ ọdọ mmiri, abụọ golf ọmụmụ, a cha cha, a disko na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ.
Ezigbo ụlọ ụlọ ndị kacha mma na Punta Kana
Mgbe ụfọdụ ị na-eme njem dịka di na nwunye, mgbe ụfọdụ isoro ụmụaka. Ọ dabara nke ọma, Punta Cana bụkwa ebe njem ezinụlọ na-aga. Yabụ, enwere ụlọ ezumike nwere ọnụ ụlọ na ntụrụndụ emere maka ụmụaka.
Dịka ọmụmaatụ, The Reserve na Paradisus Palma Real. Hotellọ nkwari akụ a nwere ihe na-erughị 200 na ụlọ bụ akụkụ ezinụlọ nke Paradisus Palma Real. Ala a sara mbara, nwee ọtụtụ ụzọ ụkwụ, enwere spa ma ọ bụrụ na ndị nne na nna chọrọ ịnọ naanị ha, ha nwekwara ohere. Ma kpakpando bu umuaka, ya mere enwere ebe puru iche nye ha, ya na trampoline na mgbidi ịrị. onye na-elekọta nwa, Mmụta ụbọchị ọ bụla ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụmụ menus.
El Nrọ Punta Cana Resort & Spa Ọ bụghị ụlọ nkwari akụ dị ọnụ ala, ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ndị ọzọ nọ na mpaghara ahụ, mana nke ahụ na-eme ka o doo anya na ọ bụghị ụlọ nkwari akụ nke igwe mmadụ. Na nnukwu ọdọ mmiri ọ bụ ndọta maka ezinụlọ, n'ezie ọ dị otu n’ime ndị kasị ibu na mba ahụ. Maka onye ọ bụla enwere ntụrụndụ kwa ụbọchị yana ọtụtụ ihe: klaasị ịgba egwu, egwuregwu, nka, klọb ndị na-eme nchọgharị, njem mmụta okike ma ọ bụrụ na ị bụ ndị na-eto eto enwere ọbụna "Teenage disko" n'abalị.
Nhọrọ ọzọ n'etiti ụlọ ezumike ezinụlọ na Punta Cana bụ Rocklọ nkwari akụ siri ike & Casinolọ cha cha: O nwere ime ụlọ 1790, ebe igwu mmiri 13, ụlọ oriri na ọ 13ụ 23ụ 18, Ogwe XNUMX na ebe golf golf XNUMX-hole. Ihe bụ ihe ọzọ, nwere ụlọ ịgba chaa chaa kasị ukwuu na Dominican Republic ma na-enye ọtụtụ ihe eji enyere ụmụaka aka: eserese ihu, nka, klaasị esi nri, ihe ngosi, ime ụlọ egwuregwu, ọdọ mmiri pụrụ iche maka ha nwere slides abụọ na osimiri dị umengwụ, obere golf golf na ịrị ugwu.
N'ikpeazụ, nke Nickelodeon Hotel & Resorts, na Uvero Alto. Ọ na-agwakọta ntụrụndụ maka afọ niile na ọtụtụ okomoko n'ihi na ọ nwere 5 estrellas. Ee ee, nyocha nke ihe odide ndị na-agagharị na Nickelodeon bara ụba. Ogbo, n'ezie! Ihe bụ ihe ọzọ, e nwere thematic oke imes, Pinnapple Villa Suite, nwere ọnụ ụlọ ihi ụra abụọ, ime ụlọ ịwụ atọ na Bikini Bottom decor.
Hotlọ nkwari akụ niile na Punta Kana
Hotelslọ nkwari akụ niile na-abụkarị ezigbo nhọrọ ebe ọ bụ na ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla ma nwee obi ụtọ n'echeghị echiche gbasara mmefu ndị ọzọ. Ebe ndị njem Caribbean kacha mma na nke a n'ihi na mmadụ na-etinye oge dị ukwuu na ụlọ ọrụ ha.
El Barceló Bavaro Obí a ma ama nkwari akụ nke nwere a nlereanya ebe: tinyere otu n'ime osimiri 10 kachasị mma n'ụwa, dị ka National Geographic si kwuo. Facilitieslọ ọrụ ahụ bụ ihe niile ị nwere ike ịtụ anya site na họtel nke agbụ a; You nwere ike ịme egwuregwu mmiri dị ka igwu mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri, ma ọ bụ kayak, nwee ụlọ nri 11 ma ọ bụ spa ma ọ bụ ụlọ ịgba egwu oge 24, ma ọ bụ ụlọ ịgba egwu abalị abụọ.
Ọzọkwa nwere a golf N'ezie na a ahịa na etiti iyipu kaadị akwụmụgwọ. O doro anya, ha agbakwunye n'abalị na-egosi na gburugburu ebe obibi nke na-ekpuchi mma.
A na-esote ya Hyatt Ziva Cap Nwere Ikea, nke dị na Plata Juanillo, kilomita ole na ole site na Punta Cana International Airport.
Hotellọ nkwari akụ a bụ nnukwu na kpakpando 5, ya mere, ọ na-eju okomoko na nanị ọrụ. Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere hotel bụ mmiri park na-asọ asọ, mmiri cannons, ebe dashboard, ọdọ mmiri maka afọ niile, osimiri ... Osimiri bụ nkeonwe ma nwee ebe a na-etinye anyanwụ, nche anwụ na akụrụngwa egwuregwu mmiri. E nwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ sixụ isii, ụlọ ọrụ na nke nkịtị, na ha niile so na ngwugwu niile.
El Iberostar Ukwuu Bavaro Ọ bụ naanị maka ndị okenye mana anyị etinye ya na ngalaba a n'ihi na ọ dị niile gụnyere. Ya ije dị nnọọ nkecha, o nwere a Central ọdọ na ọtụtụ ọdọ mmiri, nrọ loungers na anọ mara ezigbo mma ụlọ oriri na ọ eatụ toụ na-eri mba nri.
El Grand Reserve na Paradisus bụ nke Melia Palma Real, Na pearl nke Melia kwuziri. Ọ bụ ụlọ nkwari akụ ise na Bavaro, na oke ime ụlọ nwere a onwe mbara ihu, na ndụ na nzuzo obi ike na soundproof mgbidi na ala. Y’oburu n’achoo otutu okomoko a ka i choro Swim-Ip suites nke nwere ọdọ mmiri nzuzo. E nwekwara asatọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, a mgbatị, onwe osimiri, spa ...
El Ebube ebube Ọ bụ ebe a mana na Playa Gorda, na-aga ije site na ogige abụọ mmiri. Suites gunyere balconies nkeonwe, ebe a na-asa ahụ, ọrụ elekere 24, ọdọ mmiri 13 nwere ụdị ebe a na-asa Bali, mmanya na Jacuzzis. Ọ bụrụ na ị na-egwu tenis, mgbe ahụ enwere ụlọ ikpe, ọ bụrụ na ịchọrọ abalị, disko na ihe ngosi.
A nkwari akụ na Ikuku Spanish, n'ụdị colonial, bụ Ebe a na-eme ndokwa maka ebe nsọ nke dị na Playa Juanillo. Ọ dị ka a ebe ochie ewusiri ike, ya na ụlọ elu, ma ọ bụ ezie na ọ bụ ụlọ nkwari akụ niile, ọ na-adaba na ụdị nke «ndị okenye naanị».
N'ikpeazụ, enwere Ọmarịcha Punta Kana, kpakpando ise, ha niile gụnyere ma ndị okenye. Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche nke ịnya ịnyịnya, ụlọ nkwari akụ a dị mma n'ihi na ọ dị nso na Rancho Caribeño, ọkachamara na ịgba ịnyịnya. Ọ nwere ọtụtụ nke ihunanya ikuku, ọtụtụ di na nwunye lụrụ nwanyị ebe a.
Ọ gaghị ekwe omume ịdepụta ihe niile ụlọ nkwari akụ kacha mma na Punta Kana. Ha na-eju eju. Taa ụfọdụ na-emeghe, ogbugba ndu megide covid site, mana ha nwere afọ siri ike. Enwere ọtụtụ na ọ bụ ihe amamihe dị na ya, ịme ndepụta nke mmasị gị tupu ịmalite nyocha ahụ.
Ọ bụrụ na gị na onye gị na ya na-eme njem, echeghị m na ọ masịrị gị ịnwe ọtụtụ narị ụmụaka na-eti mkpu nso; Mana ọ bụrụ na ị soro ụmụntakịrị na-eme njem, ị ga-achọ ka ha nwee obi ụtọ mgbe niile yana n'ezie, ọ bụrụ na ịchọghị ichegbu onwe gị gbasara mmefu a na-agbakọtaghị ọnụ, ihe kachasị mma bụ ịhọrọ ụlọ nkwari akụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Dominican Republic » Họtelu kacha mma na Punta Kana
Coronavirus: Ọ dị mma ịga ụgbọ elu?